श्रीमानलाई नेपाल फर्काएर श्रीमतीले अस्ट्रेलियाबाटै गरिदिइन् भिसा रद्द ! «
श्रीमानलाई नेपाल फर्काएर श्रीमतीले अस्ट्रेलियाबाटै गरिदिइन् भिसा रद्द !
Published : 26 January, 2020 10:00 pm
उदाहरणका रुपमा यसै साता मात्र सिड्नीमा भएका केही घटनाक्रम हेरौं। पहिलो घट्नाक्रम, दाङमा दबङ शैलीमा हिँड्ने युवा बिक्की (नाम परिवर्तन)ले फिल्मी शैलीमै प्रेम विवाह गरे। बिहेपछि बिक्कीले श्रीमतीलाई अस्ट्रेलिया पढाउने र आफू पनि डिपेन्डेन्टमा जाने निर्णय गरे। अस्ट्रेलिया आए र काम पनि सुरू गरे। यसै क्रममा श्रीमतीलाई नर्सिङ पढाउन दिनरात मिहेनत गर्न थाले। बिक्की काममा पनि जोशिला हुन्। एक दिन श्रीमतीले नेपालमा जान र आफ्ना बाबुआमालाई भेट्न आग्रह गरिन् र पठाइन्।
धेरै घर झगडाका मामिला आफूकोमा आउने गरेको उनी बताउँछन्। ‘यहाँ महिलाहरुलाई अधिकार सम्पन्न मानिन्छ, पुरुषप्रधान समाजबाट आएका हामीलाई यस्ता घटना अचम्म लाग्न सक्छन्। ‘विदेश आएपछि बेग्लै शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा पनि केटाकेटी बीच मनमुटाव हुने गरेका छन्, जसले कालान्तरमा उनीहरुलाई सम्वन्ध बिच्छेदसम्म पुर्‍याउने गर्छ’ तिम्सिनाले भने। यो खबर सेतोपाटिमा छ ।